Nayakhabar.com: एक लिटर पानीबाट ५०० किलोमिटर बाइक चल्ने !
एक लिटर पानीबाट ५०० किलोमिटर बाइक चल्ने !
ब्राजिलका एक नागरिकले पानीबाट चल्ने बाइक बनाएका छन् ।
साओ पाओलोका रिकार्डो एजवेडोइस नाम गरेको उक्त व्यक्तिले पानीबाट चल्ने बाइक बनाएका हुन् । यतिमात्र होइन, पानीबाट चल्ने बाइकको माइलेज पनि छक्कै पार्ने छ । उक्त बाइक एक लिटर पानीबाट ५०० किलोमिटरसम्मको दुरीसम्म चल्छ । यो मोटरसाइकलमा एउटा ब्याट्री पनि जोडिएको हुन्छ ।
रिकार्डोले आफ्नो उक्त पानीबाट चल्ने बाइकको नाम टी पावर एचटुओ राखेका छन् । उक्त बाइकमा पानी राखेपछि ब्याट्रीका कारण यसले हाइड्रोजन बनाउँछ । उक्त हाइड्रोजनबाट बाइक चल्दछ । बाइकको इन्जिनमा होइड्रोजनलाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । रिकार्डो अब आफ्नो बाइक परीक्षणका लागि तयार छन्, यो परीक्षण सफल भएमा बाइकको क्षेत्रमा अद्वितीय सफलता हासिल हुनेछ ।
Posted by Kalpana at 23:14